I-Glu HCY UA LDL-C -Ukuhlola isifo sezifo ezinganyangekiyo kwi-Reagent Kit-Point yoVavanyo loKhathalelo-lweSinocare
I-Glu HCY UA LDL-C -Ukuhlola isifo sezifo ezinganyangekiyo ngokukhawuleza kwiReagent Kit
Ukusebenza ngokulula, ngokuzenzekelayo,
[imeyile ikhuselwe] I-Glucose / Homocysteine ​​/ i-Uric Acid / Ubuninzi beLipoprotein Cholesterol Reagent kit yenzelwe ukumisela ubungakanani be-glucose (Glu), i-homocysteine ​​(HCY), i-uric acid (UA) kunye ne-low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) kwi-serum yabantu . Ngokwezonyango, isetyenziselwa ukubeka esweni inqanaba leswekile yegazi, ukuxilongwa okuncedisayo kwehyperhomocysteinemia, hyperuricemia, hypercholesteremia, isifo sentliziyo, isifo sokuqina kwemithambo yegazi kunye novavanyo lomngcipheko lwezifo zentliziyo.
Uxinzelelo lwe-glucose kwi-serum lubonisa imeko yolawulo lwe-glycemic ngexesha langempela. Ulawulo olungqongqo lwenqanaba leswekile yegazi lubalulekile kuthintelo kunye nonyango lwe-glucose yegazi njengesifo seswekile
IHomocysteine ​​yenye yeemeko ezizimeleyo zomngcipheko wokuphuhliswa kwesibetho, i-coronary arteriosclerosis kunye ne-myocardial infarction, apho amanqanaba aphezulu e-homocysteine ​​enyusa umngcipheko wokuvela kwezifo. Okwangoku, ngokweempawu zayo yemetabolism, uxinzelelo lwe-homocysteine ​​ikwangumqondiso ontununtunu wokusilela kwe-vitamin B12 kunye nokusilela kwe-folic acid.
I-UA yimveliso yokuphela kokuqhekeka kwe-purines, kwaye ihluzwa yaphuma emzimbeni womntu ngezintso kunye nomchamo. Kwimeko eqhelekileyo, inqanaba leuric acid emzimbeni womntu likulingano olunamandla. Ukuphakama kwenqanaba le-uric acid kuhlala kubonwa kwizigulana ezinezifo zezintso. Ke, imilinganiselo ye-UA isetyenziswa njengoncedo ekuchongeni ukwenzakala kwe-renal kwinqanaba lokuqala.
Ubuninzi be-lipoprotein cholesterol engabonakalisa inqanaba le-lipoprotein esezantsi, ekwabizwa ngokuba yinto ye-atherogenic. Umlinganiselo ophezulu we-cholesterol ye-lipoprotein ye-cholesterol phakathi kwe-cholesterol epheleleyo ibonisa umngcipheko we-atherosclerosis. Umlinganiso ochanekileyo we-low lipoprotein cholesterol ibalulekile kuthintelo lwakwangoko, ukufumanisa isifo, unyango kunye nokunyanga kwesifo sentliziyo, kwaye sisiseko esisisiseko sokumiselwa kokuyalelwa kwabaguli be-hyperlipoproteinemia.
IHCY: 3.0 ~ 50.0 µmol / L